पतिले दिनदिनै अण्डा नखुवाएको भन्दै प्रेमीसँग भागिन् पत्नी – Khabar Silo
काठमाडौं – भारतको गोरखपुरको एक गाउँमा एक महिला पतिले दिनदिनै अण्डा नखुवाएको भन्दै प्रेमीसँग भागेकी छन् ।
खासमा चार महिना पहिले पनि ती महिला प्रेमीसँग भागेकी थिइन् र फर्किएपछि प्रहरीलाई कारण बताएकी थिइन् ।
पतिकहाँ फर्केर आएपछि महिलाले दिनदिनै अण्डाका लागि झगडा गर्न थालिन् । झगडै झगडाको क्रममा उनी फरार भइन् । उनले आफूसँग नन्दलाई पनि लिएर गएकी छन् ।
क्याम्पियरगञ्ज इलाकामा बस्ने महिलाका पति मजदूर हुन् । उनीहरूको बिहे चार वर्षअघि भएको हो । पत्नीले एक वर्षअघि घरनजिकै बस्ने एकजनासँग प्रेम गर्न थालिन् । चार महिनाअघि पनि उनी त्यही प्रेमीसँग भागेकी थिइन् ।
त्यतिखेर प्रहरीको दबाबमा फर्किएकी उनी पतिले अण्डा नखुवाउने गरेको अनि प्रेमीले दिनदिनै खुवाउने गरेको बताउँथिन् ।
अहिले फेरि उनी अण्डाका लागि प्रेमीसँग भागेकी छन् । पतिले प्रहरी थानामा रिपोर्ट लेखाएर पत्नीलाई फर्काउन माग गरेका छन् ।
काठमाण्डौं । पूर्वीय समाजमा विवाहको विशेष महत्व छ । यो मृ त्यु पर्यन्त रहने सम्बन्धको रुपमा अभ्यास हुने गरेको छ । तर एक जोडीको १५ मिनेटमा नै विवाह टु’टेको छ । वास्तवमा दुबईमा भएको एक विवाहको बारेमा हाल निकै चर्चा भएको छ, जहाँ विवाह भएको १५ मिनेटमा सम्बन्ध टु’टेको छ । विवाह तय भएपछि दुलाहा […]
काठमाडौँ । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार हरेक मानिसको व्यक्तित्व उनीहरुको राशि अनुसार फरक फरक हुने गर्दछ। कयौँ ज्योतिषशात्रका अनुसार तपाईको जति आधुनिक भएपनि यस कुरालाई नकार्न सकिदैन् की राशि अनुसार मानिसको ग्रह र नक्षत्रमा गहिरो प्रभाव पर्ने गर्दछ। राशिले व्यक्तिसँग जोडिएका कयौँ आदतका बारेमा बताउने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई केही राशिका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जुन राशिका व्यक्ति […]
जान्नुहोस,राहु र केतु भनेको के हो?यी ग्रहको दुष्प्रभावबाट बच्न के–के गर्ने (महाउपाय)
राहु केतुको नाम लिनसाथ धेरैको मनमा डरको भावना आउने गर्दछ । यी दुवै ग्रह क्रुर हुने र समस्या ल्याउने कारक मानिन्छन् ।यी ग्रहका कारण अशुभ परिणामबाट व्यक्तिले कैयौं शारीरिक र मानसिक समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ । यी दुई ग्रहको अन्य ग्रह झै वास्तविक रूप वा आकार हुँदैन । यी दुवै छाया ग्रह हुन् । यी मध्ये […]
पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन हेर्नुहोस ०७६ कार्तिक १३ गते बुधबार ई. स. २०१९ अक्टोबर ३० तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य